Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo si deg deg ah ku gaaray degmada Doolow – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo si deg deg ah ku gaaray degmada Doolow
Waxaa maanta degmada Doolow ee gobolka Gedo gaaray wafdi uu horkacaayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, isagoo socdaalkiisu la xiriiro muran ka taagan maamulada degmooyinka gobolkaas.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamud Sayid Aadan oo qeyb ka ahaa murankii ka taagnaa gobolka Gedo ee looga horjeeday Axmed Madoobe ayaa haatan gacan ka geysanaya in xaalada gobolkaas la xaliyo.
Xaalada gobolka Gedo ayaa kasii dartay kadib markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) uu gudoomiye cusub gobolka Gedo u magacaabay Muxumad Aadan.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed oo isaga laf-ahaantiisa Axmed Madoobe xilka u magacaabay si muran ku jiro ayaa iska diiday inuu xilka wareejiyo, waxayna Gedo u muuqataa inay weli dhibaato ku tahay Axmed Madoobe.
Dhinaca kale, wafdiga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamud Sayid Aadan ayaa ka kooban wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland iyo xubno ka socda uru goboleedka IGAD.